Cronies should bail out Myanmar instead of letting our leaders to beg to World Bank | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ လာဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်ငါးခုကစုစုပေါင်း တစ်ဆယ့်တစ်ဘီလီယံလောက် ရှိ နေ
Do you know what happened to the girl in this iconic Pulitzer prize winning photo from the Vietnam War? »
Cronies should bail out Myanmar instead of letting our leaders to beg to World Bank
The Personal Income Tax or Cooperate Income tax in any country in the world, including Myanmar is MUCH more than 20%.
So charge Income Tax accordingly. As the World Bank loan is less than 10% of the 11 Billion…Myanmar Country could even earn and spend the balance 10 to 15% for the people after paying back the World Bank loan PROUDLY without needing to beg.
မြောင်းထဲမှာ မြွေ ရှိတယ်လို့ ပြောရင်..မြောင်းထဲမှာ မြွေ ရှိလား မရှိဘူးလား ဆိုတာပဲ သိချင်တယ်..
မြောင်းထဲမှာ မြွေရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့လူက
ရပ်ကွက်ထဲနေတာ သန်းခေါင်စာရင်းက မတိုင်ဘူး…
ညညကျ ဘောပွဲက ကြည့်သေးတယ် ဆိုတာတွေ မသိချင်ဘူး..
မြောင်းထဲမှာ မြွေ ရှိလား မရှိလား ဆိုတာပဲ သိချင်ပါတယ် ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ခင်များ.
Link ပါနေလို့ Share လုပ်တဲ့အခါ စာတွေပါမလာဘူးဆိုတဲ့အတွက် Link ဖြုတ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ ထုတ် Daily Eleven မှာ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးသူများ၏ နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများလော၊ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့် ငါးခုကို အစိုးရအနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုလာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီသတင်းဆောင်းပါးမှာ အခုလို ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ အောက်ပါအတိုင်းသိရှိရပါတယ်။
တစ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြား ကြွေးမြီကိစ္စများဆွေးနွေးပွဲများမှာ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်း ငါးခု မှာ ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ကြိမ်မှ ထောက်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာမရှိပါဘူး။
နှစ်။ Daily Eleven က ညွှန်းထားတဲ့ Mr.Jelson Garcia ဆိုတာဟာလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ Bank Information Center ဆိုတဲ့ NGO က ဖြစ်ပါတယ်။
သုံး။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကို သတင်းဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရား ၀င်ထပ်မံစိစစ်ပေးဖို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အချက်များအရ Bank Information Center ဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်က http://www.bicusa.org/ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ The Bank Information Center (BIC) partners with civil society in developing and transition countries to influence the World Bank and other international financial institutions (IFIs) to promote social and economic justice and ecological sustainability. BIC is an independent, non-profit, non-governmental organization that advocates for the protection of rights, participation, transparency, and public accountability in the governance and operations of the World Bank Group and regional development banks.
အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ၀န်ထမ်းစာရင်း မှာအခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Jelson Garcia is the Manager for BIC’s Asia Program. A Filipino national, Jelson has previously worked foranumber of local and international groups, which facilitated his close interaction with indigenous communities, federations of farmers, rural workers and fishermen and the demobilized combatants. He coordinated the campaign, advocacy, research and resource generation units of Peace for Development Group, supporting grassroots initiatives for agrarian reform, organic crop diversification, and environmental rehabilitation. He has researched sustainable agriculture alternatives promoted by MASIPAG,aFilipino national network of farmers, scientists and NGOs. He has also led two INGO-funded action research projects on the micro-level impacts of WTO policies as articulated in coastal development, sugar industry, agricultural and forestry programs of the national and local governments.
အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီ လ ၈ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာ Mr.Jelson Garcia က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ များစတင်ပေးမယ့်အခြေအနေကိုတင်ပြဆွေးနွေးတယ်လို့ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက်က အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ် –
Minutes of the Meeting of the Bank Information Center’s Board of Directors on
1) There were present:
Board members: David Hunter (Chair), Sandra Smithey, Mamadou Goita, Charly Moore (Treasurer), Lisa Veneklasen, Katharine Redford, Athena Ballesteros, Juliette Majot (by phone)
Staff: Chad Dobson (Executive Director), Alvin Carlos (Development Director, Board Secretary), Hetal Patel (Senior Finance Associate, during Financials discussion), Mark Rentschler (Campaigns Director, during the Safeguards discussion), Joshua Lichtenstein (during the review of BIC programs), Jelson Garcia (during the Burma Update session)
Regrets: Marcus Colchester
2) Mr. Hunter convened the meeting at 9:20am. ××××××××
22) Mr. Garcia gaveapresentation to the Board on the latest developments in Burma. He conveyedacautious optimism amongst civil society as flickers of change in the country continue to unfold. The World Bank may engage in initial technical assistance around specific sectors. BIC is well-placed to support informed civil society interventions around IFI re-engagement.
နောက်ထပ် ထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာဆက်လက်ဖော်ပြပေး
Tags: Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Cronies, Muslim, Myanmar, Rohingya people, World Bank
This entry was posted on September 11, 2013 at 9:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.